‘Uhulumeni kumele kube uyena oholela imali yesibonelelo' | News24
‘Uhulumeni kumele kube uyena oholela imali yesibonelelo'
Johannesburg – Uhulumeni kumele kube uyena othatha izintambo zokusingatha uhlelo lokuholelwa kwemali yesibonelelo, kusho uMgcinimafa we-ANC, uZweli Mkhize.
Kodwa-ke uhlaka olubhekelele ukuholelwa kwezibonelelo, iSA Social Security Agency, luzothwala kanzima ukuthi ibe nobuxhakaxhaka obudingekayo ukusabalalisa imali yesibonelelo.
Usho kanjalo ngesikhathi ekhuluma emcimbini weGordon Institute of Business Science ngoLwesithathu kusihlwa.
UMkhize uthi ngenxa yokubanzima kwalo msebenzi, kuba nzima ukuthola enye inkampani ezokwazi ukuwenza.
OLUNYE UDABA: UZuma uzophendula imibuzo ePhalamende ngoDlamini noMolefe
NgoLwesithathu, iNkantolo yoMthethosisekelo isigodlile isinqumo mayelana nesicelo ebesifakwe yinhlangano yomphakathi iBlack Sash sokuthi inkantolo kube iyona eqapha isivumelwano esisha sokuholelwa kwemali yesibonelelo.
Le nkantolo ihlabe yahlikiza uSassa kanye noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi, uBathabile Dlamini, ngokuhluleka ukuqinisekisa ukuthi lube selukhona uhlelo lokuholelwa kwemali yesibonelelo ngaphambi komhlaka-31 kuMashi.
UMkhize uvumile ukuthi sekube kuningi ukuhluleka ezinkampanini ezilawulwa uhulumeni, wathi kodwa lokho kumele bakuthathe njengenselelo okumele babhekane nayo.